Sida Loogu Sameeyo Qalab otomaatig ah Suuqgeynta adiga | Martech Zone
Talaado, Juun 17, 2014 Talaado, Juun 17, 2014 Douglas Karr
Waxaa jira jahwareer badan oo ku saabsan wejiga hore ee maanta oo ku saabsan waxa saxda ah otomaatiga suuqgeynta. Waxay u muuqataa in shirkad kasta oo xisaabisa sida loo diro emayl iyada oo ku saleysan dhacdo kicisay ay iyagu isu wacaan suuq-geynta suuqa. Waxaan ka baranay shirkadeena suuq geynta suuq geynta, Xaqiiqda Isdhexgalka, in ay jiraan astaamo aad u kala geddisan oo ah nidaamka otomatiga suuqgeynta ee ay tahay in suuq kasta uu raadsado:
Data - kartida xog ururin, ama foomam, ama macaamiil isku dhafan iyo keydka macluumaadka. Tani waxay awood u siineysaa shirkadaha inay si sax ah u kala soocaan isgaarsiintooda xagga tirakoobka, firmagraphics, taariikhda iibsiga, iyo xogta kale ee muhiimka ah.
Dhibcaha - si fudud u kicinta dhacdo ma ahan otomaatig, laakiin waa awooda lagu fiirsado isdhexgalka badan ee hogaamiyaha ama macaamilka iyo horumariyo qaabka gooldhalinta taas oo macaamilka u dhaqaajisa meertada nolosha macaamiisha ayaa ah sida aad dhab ahaan ugu hesho farriinta saxda ah qofka qaata ee ku habboon waqtiga saxda ah.
Fariin Daran oo Kicisay - Mararka qaarkood kicinta emaylka, sida kiisaska gawaarida dukaamaysiga laga tagay, si fiican ayey u shaqeysaa. Laakiin waqtiyo kale waxaad u baahan tahay inaad gudbiso macluumaad waxtar leh oo ku wargelinaya rajadaada illaa ay diyaar u yihiin inay tallaabo qaadaan ama wax iibsadaan. Suuq geynta waa muhiim, keenida fariin qofka qaata markay doonayaan ama u baahdaan.
Is dhexgalka Bulshada - macaamiisha iyo hogaamiyayaashu waxay la falgalayaan noocyo iyaga oo adeegsanaya warbaahinta bulshada, maahan oo keliya boggooda ama bogga soo degaya. Qalabkaaga otomatiga suuqgeynta waa inuu awoodaa inuu cabbiro saameynta dhibcaha taabashada.
Dabcan aqoonsiga booqdaha, bogagga degitaanka, emaylka iyo suuqgeynta moobiilka, isdhexgalka isticmaale fudud ayaa ah dhammaan astaamaha waaweyn ee nidaamka otomatiga suuq geynta. Dooro madal otomaatig ah suuqgeyntaada si xikmad leh. Waxaan daawaneynaa sida shirkado badani u iibsadaan nidaam hodan ku ah muuqaal aysan waligood hirgelin - laakiin ay iska bixiyaan. Waxaanan daawaneynaa shirkadaha kale ee ku dhibtoonaya inay si buuxda u ogaadaan soo noqoshada iibka otomaatigooda suuq geynta maxaa yeelay nidaamka ayaa aad u xaddidan. Qaar badan oo ka mid ah aaladaha otomatiga ee suuqgeynta ayaa ku xaddidan helitaanka, mana ku filna inay diirada saaraan haynta iyo horumarinta macaamilka.
Qeybaha suuq-geynta ee doonaya inay helaan faa'iido tartan, aaladaha otomatiga suuq-geynta waxay bixiyaan fursado aad u weyn. Tusaale ahaan, shirkadaha maal-galiya softiweerka otomatiga suuq geynta waxay caadi ahaan ku ogaadaan boqolkiiba 15 kaydinta shaqadooda hal-abuurka ah. Xitaa ka sii wanaagsan, shirkadaha badankood waxay bilaabaan inay ogaadaan soo noqoshadooda maalgashiga isla markiiba - 44 boqolkiiba waxay ogaadeen ROI lix bilood gudahood, iyo 75 boqolkiiba waxay arkaan ROI sanad gudihiis. Si tan oo dhan loo sameeyo, in kastoo, waxaad u baahan tahay inaad hesho dad ku habboon meesha.
Tani suuq-geynta suuq-geynta suuq-geynta ee ka soo jeeda Adecco waxay leedahay burburin weyn oo ah faa'iidooyinka iyo hababka ugu fiican ee loogu talagalay gelinta qalabkaaga suuq-geynta suuqgeynta si aad u isticmaasho.
Tags: adeccoxogta macaamiishaDatademographicsemail faleebosuuqgeynta faleebogaraafyadahubsashodhibcaha hogaankasuuq-geynta suuqasaxda ah is-dhexgalkadhibcahaqaybintaemayl kiciyaykiciyay dir
Lahjad Accelerator: Iswaafaji Iibka iyo Qalabka Suuqgeynta